VaTsvangirai Voshushikana neMashandiro eDare reSenate
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vakati vanoshushikana zvikuru nemafambisirwo ebasa mudare repamusoro reseneti, sezvo nhaurwa dzakawanda dzaifanirwa kukurukurwa mudare iri neChipiri dzakaendeswa mberi pasina chazeyiwa.
Mashoko aVaTsvangirai anotevera kupinda mudare reseneti kekutanga kwavakaita nemusi weChipiri kubva pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa. VaTsvangirai vakati pane zvakawanda zvinofanirwa kunge zvichikurukurwa nenhengo dzedare iri asi hadzisi kuratidza chido chekuita izvi.
Pamisoro yenyaya misere inonzi yaive pahurongwa hwekuzeyiwa, Order Paper, kana kuti gwaro rezvaida kukurukurwa, nyaya chete ndiyo inonzi wakabatwa batwa.
Vanomirira Chisipte mudare reseneti vachimirira MDC-T, uye vari mutevedzeri wegurukota rezvemitemo, VaObert Gutu, vaudza Studio 7 kuti vanowirirana nemaonero aVaTsvangirai.
Asi vatiwo hurumende inofanirwa kutarisisawo mari dzekubatsirikana dzinopiwa nhengo dzeparamende neseneti, sezvo dziri shoma zvekuodza mwoyo yevakawanda.
Asi imwe nhengo yeseneti inomirira Tsholotsho mu MDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, VaBelieve Gaule, vanoti havawirirane nemashoko aVaTsvangirai sezvo zvose zvaive paOrder Paper iri vakanga vakazvizeya kare.